यी खानेकुराहरु जसले मेटाबोलिज्म कमजोर बनाइदिन्छ - Esidhakahabr
Home स्वास्थ्य यी खानेकुराहरु जसले मेटाबोलिज्म कमजोर बनाइदिन्छ
यी खानेकुराहरु जसले मेटाबोलिज्म कमजोर बनाइदिन्छ
मेटाबोलिज्म शरीरको यस्तो प्रणाली हो, जसले शरीरमा उर्जा बनाउनको साथ त्यसको प्रयोग गर्छ । यसबाट सजिलैसँग के थाहा पाउन सकिन्छ भने मेटाबोलिज्म धिमा भएपछि शरीरमा उर्जाको कमी हुन्छ । यसले गर्दा हरेक समय थकान महसुष हुन्छ । शरीर आलस्य हुन्छ । शरीरले उर्जालाई सही ढंगले प्रयोग गर्न पाउँदैन । यसले गर्दा क्यालोरी फ्याटको रुपमा शरीरमा जम्मा हुन्छ । यसैले मोटोपन बढ्छ ।
यसको ठीक विपरित यदि कुनै व्यक्तिको मेटाबोलिज्म तिब्र छ भने उनमा उर्जा भरपूर हुन्छ । उनको शरीरले राम्ररी फ्याट बर्न गर्छ । शरीर तन्दुरुस्त रहन्छ । मोटोपनको समस्या हुँदैन । अब प्रश्न उठ्छ, मेटाबोलिज्म कसरी तिब्र बनाउने त ?
यसका लागि तीन तरिका छन् ।
एक, स्वस्थ्यकर र सुपाच्य खानेकुरा सेवन ।
दुई, गहिरो र पर्याप्त निद्रा ।
तीन, नियमित समुचित व्यायाम ।
त्यसो त मेटाबोलिज्म सुस्त हुनुका अनेक कारण हुनसक्छ । त्यसमध्ये एक हो, गलत खानेकुराको सेवन । केही यस्ता खानेकुरा छन् जो हामी दैनिक सेवन गर्छौ । यी खानेकुरा अस्वस्थ्यकर त हुन्छ नै मेटाबोलिज्मलाई पनि सुस्त बनाइदिन्छ । त्यसैले यस्ता खानेकुराले मोटोपन बढाउँछ । के हुन् त ति खानेकुरा ?
सेतो चामल, सेतो पाउरोटी, सेतो पास्ता वा मैदाबाट बनेको खानेकुराले मेटाबोलिज्ममा असर पु¥याउँछ । यी सबै खानेकुरा प्रशोधित अन्नबाट बनाइन्छ । यसमा न फाइबर हुन्छ, न पर्याप्त पोषक तत्व नै । त्यसैले यस्ता खानेकुराले मोटोपन बढाउँछ । त्यसो त आलुलाई पनि तेलमा तारेर सेवन गर्दा त्यो अस्वस्थ्यकर हुनछ । यद्यपि उसिनेको आलु भने स्वस्थ्यकर मानिन्छ ।
गुलियो खानेकुरा खासगरी कृतिम चिनीबाट तयार गरिएका परिकारले मेटाबोलिज्म धिमा बनाइदिन्छ । त्यसो त यस्ता परिकारले रगतमा सुगरको मात्रा पनि ढाउँछ । यसले मधुमेहको जोखिम बढाउनका साथसाथै अन्य अंगलाई पनि नष्ट गर्छ ।
गुलियो खानुपर्छ, तर प्राकृतिक गुलियो । जस्तो कि, फलफूल ।
मदिराको थोरै मात्राले पनि हाम्रो स्नायु प्रणालीमा नराम्रो असर गर्छ । यसका साथै मदिराले मेटाबोलिज्मलाई एकदमै धिमा बनाइदिन्छ । मदिराको सेवनले कलेजोमा क्षति पुग्छ ।
Previous articleदु:खद खबर: उदयपुरमा जिप दुर्घटना हुँदा पाँचको मृ’त्यु, तीन घाईते
Next articleनविल बैंकका प्रमुख (सीईओ) अनिल केशरी शाहलाई कारोना संक्रमण
कोरोना महामारीमा रोग प्रतिरोधी क्षमता कसरी विकास गर्ने? जानकारी लिनुहोस्
आज नवरात्रिको आठौँ दिन महाअष्टमी, दुर्गाभवानीको विशेष पूजाराधना
समाज admin - Modified date: October 24, 2020 0
काठमाडौं, बडादशैँको आठौं दिन आज महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाराधना गरिन्छ । महाअष्टमीको दिन दुर्गाभवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले यसको विशेष महत्व छ...
फ्रान्समा अहिले सम्मकै धेरै एकैदिन ४१ हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित
अन्तराष्ट्रिय admin - Modified date: October 23, 2020 0
काठमाडौं, फ्रान्सको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गएको २४ घन्टा यता मात्र कम्तीमा पनि ४१ हजार ६२२ जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।अहिले सम्मकै धेरै...
समाचार admin - Modified date: October 23, 2020 0
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना २,७२० जना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा पछिल्लो चौबीस घण्टामा २,७२०...
Uncategorized admin - Modified date: October 23, 2020 0
काठमाडौं ,पछिलो २४ घन्टामा नेपालमा कोरोनाका ४,४९९ जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा १६ हजार ८६४...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना सन्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने
काठमाडौं, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बुटवलमा बसेको प्रदेश कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले लक्षणसहितका सन्क्रमित बिरामीको उपचार गर्दा लाग्ने खर्चमध्ये...
भोली नवरात्रिको आठौँ दिन, महाअष्टमी पूजाकाे पाैराणीक महत्व
समाज admin - Modified date: October 23, 2020 0
काठमाडौं,आश्विन शुक्ल अष्टमीको दिनलाई महाअष्टमी भनिन्छ । नेपालीहरुले बडादशैँका रुपमा महाअष्टमी देखि विशेषरुपमा दुर्गा भवानीको पूजा–आराधना गर्छन् । महाअष्टमीको दिन शास्त्रसम्मत रुपमा दशैँघर, कोतलगायत...